नियतवस फसाउने प्रयास भयोः डा. रुप ज्योति - सुनाखरी न्युज
नियतवस फसाउने प्रयास भयोः डा. रुप ज्योति
Posted on: December 14, 2019 - 7:41 am
डा. रुप ज्योति नेपालकै एकजना चर्चित ब्यवसायी हुन् । पुर्व अर्थ सहायक मन्त्री समेत रहेका ज्योतिलाई पुराना मुद्धामा अनावश्यक विवाद झिकेर फसाउने काम हालै मात्र भयो । यस बिषयमा सुनाखरी न्युजकालागि गरिएको कुराकानीको संपादीत अंश:
तपाइँलाई के आरोप लगाइएको हो ? किन ?
मेरो केसमा मुद्दा दर्ता भयो, अदालतमा पेस भयो, केस अगाडि बढ्यो । जाहेरीले तीन जनाको कम्पनीको हैसियत रहेको सेयरहोल्डर रहेकोमा एउटामा चाहिँ ज्योति एन्ड कम्पनीको सेयरहोल्डरको लगत लिएर आयो । लेन्डरको सेयरहोल्डर ज्योति एन्ड कम्पनी रहेकाले यो केसमा मेरो संलग्नता देखायो । तर, कुनै पनि कम्पनीको सेयरहोल्डर धेरै व्यक्ति हुन्छन् । यसको मतलब सबै सेयरहोल्डरहरू त दोषी हुँदैनन् । यो खालको केसले गर्दा कुनै खालको नजिर बसेमा सेयर होल्डरको दायित्व कसरी आयो भनेर अदालतले बुझेको हुनुपर्ने हो । यसमा त रकम नै जम्मा भएर केस सुल्झिसकेको अवस्थामा ठगी कसरी भयो भनेर यस्तो परिस्थितिमा प्रहरीले नै केस अगाडि नबढाउनुपर्ने हो । तर केस अगाडि बढ्यो ।
मेरो केसमा यो अलि फरक ढंगले लागेको देखियो । ब्याकअप सपोर्टबिना यो केस कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनुपर्ने कारण नै थिएन । ब्याकअप सपोर्टकै भरमा बढी आक्रामक ढंगले अगाडि बढेको देखियो । प्रहरीले यो केसमा वारेन्ट जारी गर्न मिल्दैन भनेको भए पनि ठाडो आदेशमा यो केसमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु भनेर वारेन्ट जारी गरिएको पाइयो । योसँगै प्रहरी प्रशासनले पनि केसअगाडि बढाएको हो ।
तपाइँको गल्ति थिएन ?
मैले कुनै किसिमको गल्ती गरेको थिइनँ, अदालतमा छिनोफानो भइहाल्छ भनेर चुपचाप सकारे । वास्तवमा नै मेरो कुनै दोष थिएन । मैले केस लडेँ । सामना गर्ने निर्णय गरें, भएको पनि केही थिएन । मलाई मात्र होइन, मेरी छोरीलाई पनि प्रहरीले समात्यो । यो खालको निर्णयले प्रहरी प्रशासनमा प्रश्न चिह्न भने खडा भएको छ । मलाई थुनेपछि कल्पना नै नगरेका धेरै जनाले सहयोग गर्नुभयो । धेरेजनाले हामीलाई पनि यस्तै प्रकारको समस्या आइलागेको तर बाहिर ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने मेरे केसमा केही समस्या नै थिएन । प्रहरीबाट सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रहरीले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उनीहरूको दायित्व आयो । जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरीले कार्यान्वयनमा जोड दियो । तर यस्ता प्रकारले गरिने केसमा मेरो केस नै अन्तिम केस होस भन्ने म चाहन्छु । यसबाट उद्योगी ब्यापारी तथा ब्यपासायी हतोत्सायी हुने वातावरण बन्नु हुन्न भन्ने मेरो दृढ विचार छ ।
यसअघि केही बार्गेनिङ वा छलफल भएको थियो कि ?
केही कुराहरू आएको थियो, कुरा भएको थियो, सबैले सत्यतथ्य खोज्न थाल्यो । सबैले के बुझौं भने यो रकम सीई कन्ट्रक्सनको एक जिम्मेवार ब्यक्तिलाई बुझाइएको थियो । बुझिलिनेले भर्पाइ गराउँदा ल्यान्डमार्क कम्पनी जुनचाहिँ आधिकारिक कम्पनी हो त्यसको व्यक्तिमार्फत भनेर गरेको थियो । भर्पाइ र सम्झौता फरक हो । यस केसमा त भर्पाइमा नै सम्झौता गरेको छ । यो गलत छ । आश्चर्यजनक के छ भने भर्पाइमा करार भनेर केके भरेर दिएको छ । भर्पाइ १ करोड २६ लाख पनि भर्पाइ लिँदा पनि ल्यान्डमार्कको आधिकारिक व्यक्ति भनेर दिएको छ । भर्पाइ पनि करार भनेर दिएको छ ।
यो योजनाबद्ध रूपमै गरिएको हो त ?
कानुनी राज्यमा न्यायालय र प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । जुन वास्तवमा दुःखद हो । कानुनमा पनि हिरासतमा राख्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन । यसका लागि विभिन्न सर्त लागू हुने देखिन्छ । यसरी कानुनी रूपमै केही नभएको केसमा मलाई थुनेर मुद्दा गराउँदा प्रहरी र अदालत नै लाचार भएको मैले पाएँ । मजस्तो कानुन बुझेको मान्छेलाई त यहाँ गरिखान गाहो छ भने सर्वसाधारण व्यक्तिको केसमा के होला जस्तो लाग्यो मलाई । तर जेहोस्, म मनैबाट फेरि भन्छु मेरो केस अन्तिम केस होस् । नेपाली नागरिकमा न्याय, कानुन तथा प्रहरी प्रशासनमा पूर्ण विश्वास हुने वातावरण बनोस् ।
मैले जाहेरीपछि मात्र पढ्न पाएँ । म त आश्चर्यमा परें । उक्त जाहेरीमा कस्तो अन्ट–सन्ट कुरा लेखेको रहेछ । तर, एउटा कुरा के लेखेको रहेछ भने मैले पटक–पटक गरेर यो रकम बुझाएको छ । सीईले जुन भर्पाइ रसिद जारी ग(यो उसले पनि आजको यति यति मितिमा बुझिलिएको छ भनेर लेखेको छ ।
पहिलो पटक १० लाख भर्पाइ जारी गर्दा मैले यो मितिमा यो चेकबाट बुझिलिएको भनेर लेखेको छ । १ करोड २६ लाखमा कुनै कानुनी प्रावधान पूरा गरेको छैन । हामीकहाँ पैसा जम्मा गरेको छैन । तपाईं जहाँ पैसा जम्मा गरेको र भर्पाइ जसको हो, त्यहीं जानू । हाम्रो भर्पाइ नै होइन । जाहेरी दिने मान्छेले पनि स्वीकार गरेको छ पैसा मसँग छैन भनेर । तर अन्य ब्यक्तिबाट ५ करोड निकाल्न सक्ने देखिएन । मसँग र मेरो कम्पनीसँगको लेनदेन नै हैन भन्दा पनि हामीमाथि केस लगाएर पैसा निकाल्न खोजियो । दुई पक्षबीच केही मिलेमतो थियो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यो सामान्य कुरामै प्रहरी र अदालत नै पनि झुक्किएको देखिन्छ ।